Mametraka An-tSarintany Ny Fahafatesan’Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2016 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Deutsch, বাংলা, English
Oromo mpanao fihetsiketsehana mivorivory ao Addis Ababa. Sary Flickr navokan'ny mpisera Gadaa.com.
Hatramin'ny fanombohan'ny volana Novambra 2015, dia farafahakeliny 140 ireo mpanao fihetsiketsehana milamina no maty novonoina tao Ethiopia araka ny fampitam-baovaon'ny Human Rights Watch Mpanara-maso ny Zon'Olombelona ary ny porofa an-dahatsary no mametraka fa ny anknamaroan'ireo olona maty ireo dia voatifitra amin'ny bala tena izy eo akaiky dia akaiky.
Misy ihany koa ny tatitra nataon'ny Oromo mpikatroky ny zon'olombelona manondro fa farafahakeliny dia 10 ny olona maty nandritra ny fampijaliana azy ireo tany am-ponja.
Eto ambany misy sarintany ifarimbonana natsangan’ny mpanoratra amin'ny teny anglisy niaraka tamin'ny fanampian'ny Oromo mpikatroka Abiy Atomssa. Olona 111 maty nandritra ny fihetsiketseham-panoherana naharitra am-bolana no tafiditra lisitra ato amin'ity sarintany ity. Miangavy izay rehetra manana porofom-pahafatesana na fanjavonana mpanao fihetsiektsehana hifandray aminay amin'ny alalan'ny editor@globalvoicesonline.org.
Na dia eo aza ny porofo efa voalaza, dia milaza ny governemanta Ethiopiana sy ny mpaneho hevitra pro-governemanta fa eo amin'ny olona dimy eo no maty.
Tamin'ny antsafa tamin'ny fampielezam-peo ny filohan'ny vaomieran'ny zon'olombelona pro-governemanta, Addisu Gebregziabher no nilaza fa ho ny fiarovana ny filaminana dia voatery hampiasa hery amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny governemanta.